September | 2011 | Samaroon's Weblog
Awdal Development Organization
Awdal Youth foundation
mukhtaar gaafane on Abla-Ablaynta Beelaha Qabiilka…
Ahmed Nour on Kabaalka nagi — Gabay- u…
mahdi carab on Abla-Ablaynta Beelaha Qabiilka…
Sidee bay u dhici jirtay Caleemo-saarka Ugaaska Gadabuursi?
Posted on September 10, 2011 by samaroon
Qoraalkan waxa laga soo qaatay buuggii uu qoray I.M Lew see “Dimoqraaddiyadda xoolodhaqatada: Daraasad laga sameeyey xoolodhaqaqatonimada iyo siyaasadda ee ka jirta reer woqooyiga
Xoolodhaqatada soomaaliyeed waxay leeyihiin dhawr munaasabadood oo si weyn loogu dabbaaldago iyo xusas yar yar. Haddaba xiisaha ay leedahay awgeed, waxan halkan ku soo koobay hannaanka loo agaasimo xaflad dhaqameedyada gadabuursiga oo dhammaystiran oo aan ka helay Cabdiraxman Sheekh Nuur, oo ah qaaddiga sare ee Borame.
Marka xafladdan la qabanayo, waxa meel dhir hadhac ah iyo biyoba leh iskugu yimaadda muddakarka reeraha. Halkaas waxa lagu soo bandhigaa suugaan iyo ciyaaro kala duwan dabadeedna halkaa lagu qalo xoolihii loogu talogalay ducada iyo dabbaaldegga. Waxa si feejiga leh loo eegaa xiddigaha si loo ogaado godka hoodada habeenkaas, halkaas oo doorashada ugaaska cusubi ku xidhan tahay sifaha laga rabo god-xiddigeedka halkaas ka soo baxay. Murashaxiintu waa inay ahaadaan wiilasha ama walaalaha ugaaskii hore oo hooyadii la bilcamay, horena loo soo furin, oo aan la dumaalin.
Subaxnimada hore ee maalin isniineed, ayaa nin reer nuur ahi (laandheeraha gadabuursiga) ubax ama caleemo qoyan saarayaa ugaaska. Dabadeedna dadkii kale oo dhammina ka daba raacayaan caleemo saarka. Ninkaa caleemo saarka bilaabayaa waa inuu noqdaa nin hodan ah oo leh xoolo badan, afar xaas iyo wiilal badan. Rag jilibka maxaad Muuse ah ayaa u keenaya ugaaska afar gorof oo caana ah, gorof caano geel, mid lo’ah, mid ido ah iyo mid riyo ah. Ugaasku wuxu qaadanayaa afarta gorof ee caanaha midkood isagoo waxoogaa ka cabaaya. Haddii uu gorofka caanaha geela cabbo waxa barakoobi doona geela, haddii ka riyaha uu cabbo riyaha ayaa barakoobaya, kuwa kalena sidoo kale. Intaa dabadeed waxa loogu sadqaynayaa wan afar jir ah. Waxa timaha ka xiiraya nin gadabuursi ah kana bixinaya dharkii hore ee uu xidhnaa isla markaana u labisaya dharkii ugaasnimo. Waxa cumaamadda u xidhaya nin Yoonis ah waxana dharkii laga beddelay qaadaya niman jibraacin ah.
Dabadeed ugaasku wuxu fuulayaa faraskiisa ugu fiican isagoo u baqoolaya ceelka la yidhaa Rugay ee u dhaw Geerisa oo ku taal dhinaca xeebta. Ceelku waa mid aad u biyo macaan. Ugaasku wuxu ku fadhiistaa dhagax-cad Ceelka korkiisu leeyahay. Waxa halkaas ugu maydha walaalkii ama nin xigtadiisa ugu dhaw ah. Kadib wuxu ku soo laabtaa madashii dadweynuhu ku sugnaayeen, halkaas oo mar kale loogu caleemo saaro looguna sacabtumo. Waxa dib u bilaabma ciyaaro dhaqameed iyo dabbaaldeg. Ugaasku wuxu jeediyaa khudbad uu dadkiisa ugu ducaynayo isagoo ilaahiisa uga baryaya inuu ugu deeqo nabadgelyo buuxda, caano badan iyo roob – Sareedo iyo barwaaqo ( nabad iyo caano). Markaa ka dib haddii uu roob dao’dadku waxay yiqiinsanayaan in boqorkaasi yahay mid hoggaankiisu hoodo iyo cawo badan leeyahay. Maaddaama sida caadada ah ay xafladdani dhacdo xilli roobaadka karanta waxay u badan tahay in roobkaasi dao’. Waxa ugaaska la siiyaa aqal cusub oo agabkiisu u dhan yahay waxana loo doonaa gabadh. Waa inay ka soo jeeddaa qoys sharaf leh, islamarkaana ay noqotaa gabadh ay dhashay hooyo la bilcamay (aan hore loo guursan) oo guurkeedii koowaad ku eg. Yaradka waxa wada bixiya gadabuursiga oo dhan si ay u sugaan mansabkani inuu yahay mid dhex u ah. Qoryaha rayfallada iyo wixii kale ee hub dagaal ahiba kama mid aha yaradka la bixinayo. Wixii kasta ee ugaaska la guddoonsiinayaa waa inuu noqdaa mid dhiirigelinaya nabadda iyo naaloodka.
Soo dhawayntii Ugaaska